ကျွန်​မမျော်​လင့်​ခဲ့​သော​နိုင်ငံ​ခြား​အပိုင်း(၂) | J-Myanmar
ကျွန်​မမျှော်​လင့်​ခဲ့​သော နိုင်ငံ​ခြား အပိုင်း(၂)
၁​၉⁠၉​၆ စက်​မှု​တက္ကသိုလ် အရေး​အခင်း​ကြောင့် တက္ကသိုလ်​တွေ အပိတ်​ခံထား​ရ​တဲ့ ကျွန်မ​တို့​ခေတ် လူ​ငယ်​လေး​တွေ​ဟာ .. မြန်မာ​ပြည်​မှာ ကြာ⁠ကြာ​ဆက်​နေ​ရင်​ပဲ .. တိုးတက်​မှု​တွေ နှောင့်နှေး​တယ်။ လူ့​အခွင့်အရေး​တွေ ဆုံးရှုံး​တယ်။ ဘဝ​အတွက် အချိန်​တွေ နောက်ကျ​နေ​ပြီ​လို့ ခံစား​ခဲ့​ကြ​ရ​တယ်။ ထို​လူ​ငယ်​တွေ​ထဲ ကျွန်မ​လည်း တစ်​ယောက် အပါအဝင်​ပေါ့ ~~~
ကျွန်မ​ကို မေမေ​က​မေး​တယ် …. ကျွန်မ (၁​၀)တန်း​အောင်​တော့ သမီး စင်္ကာ​ပူ​မှာ Poly သွား​တက်မ​လား ၊ မလေးရှား ၊ ဘန်​ကောက်​မှာ ကျောင်း​သွား​တက်မ​လား ?
ကျွန်မ ပြန်​ဖြေ​ခဲ့​တယ် … မေမေ …. သမီး​သွား​ချင်​တဲ့ နိုင်ငံ (၃)ခု​ပဲ​ရှိ​တယ်။
– ဩစတြေးလျ … ဒီ​နိုင်ငံ(၃)ခု​က​လွဲ​ရင် ဘယ်​နိုင်ငံ​မှ သွား​မ​နေ​ဘူး .. မြန်မာ​ပြည်​မှာ​ပဲ တက္ကသိုလ်​တက်​ပြီး ကျောင်းဆရာ​မ ပြန်​လုပ်​မယ်။
တက္ကသိုလ်​ဝင်​ခွင့် လျှောက်လွှာ​တွေ လက်ခံ​ပြီ ။ ။
ကျွန်မ​ကို မေမေ​က Guide Line ချ​ပေး​တယ်။ ဘယ် Major ကတော့ ဘယ်​လို​အသုံးဝင်​တယ်။
ဘယ် Major ကတော့ ဘာ​လုပ်​စား​လို့​ရ​တယ်။ ကျွန်မ​ကိုယ့်​ဘာသာ​ကိုယ် ရွေးချယ်​ဆုံးဖြတ်​တယ်။
ပထမ​ဦးစားပေး – ရန်ကုန်​စက်​မှု​တက္ကသိုလ် (Y.I.T)
ဒုတိယ​ဦးစားပေး – အင်္ဂလိပ်​စာ (အထူး​ပြု)
တတိယ​ဦးစားပေး – စီးပွား​ရေး​တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) (မေမေ​တက်​စေ​ချင်​သော တက္ကသိုလ်)
ကျောင်း(၃)ကျောင်း​ပဲ ဖြည့်​ပြီး လျှောက်လွှာ​ပြန်​တင်​လိုက်​တယ်။
ကျွန်မ ရန်ကုန်​စက်​မှု တက္ကသိုလ်​တက်​ပြီး Civil Engineer သိပ်​ဖြစ်​ချင်​ခဲ့​ပေ​မယ့် စက်​မှု​တက္ကသိုလ် ဝင်​ခွင့် အမှတ်​ဖြတ်​တော့ (၃)မှတ်​နဲ့ ကပ်​ပြီး အမှတ်​မ​မှီ​ဘဲ ပြုတ်​ကျန်​ခဲ့​တဲ့​အတွက် .. အင်္ဂလိပ်​စာ (အထူး​ပြု) ကို​ပဲ ယူ​လိုက်​တယ်။
ကျွန်မ ဖြစ်​ချင်​ခဲ့​သော အင်​ဂျင်​နီ​ယာ ဘဝ​ကို လက်လွှတ်​ခဲ့​ရ​တယ်
အသက်(၂​၀) အရွယ် ကျွန်မ တက္ကသိုလ်​ကို သူ​များ​တွေ​လို Day တက်​ချင်​တာ​ပေါ့ ….
မေမေ​က Option (၂) ခု​ပေး​တယ်။
– Day University တက်​ပြီး (၃)နှစ်​ကို ဟေး​လား​ဝါး​လား အချိန်​သွား​ဖြုန်း​မ​လား ?
– Distance University တက်​ပြီး အမေ​ရိ​ကား​သွား​ဖို့ ပညာ​ဝမ်းစာ​တွေ​ကို အပြင်​မှာ ရှာ​မ​လား ?
ကျွန်မ 2nd Option ကို ရွေး​ခဲ့​တယ်။
ဟုတ်​တယ် .. နေပူ​ကျဲ​ကျဲ ဒ​ဂုံ​တက္ကသိုလ်​မှာ ကျောင်း​မ​တက်​တော့​ဘူး။
အပြင်​မှာ သင်​တန်း​တွေ​တက်​တယ်။ Certificate တွေ ယူ​တယ်။
(သံ​ရုံး​ကို ဗီဇာ​ဝင်​တဲ့​အခါ ပညာ​ရေး​နဲ့​ဆိုင်​တဲ့ အထောက်​အထား​တွေ​ပြ​ဖို့​လို​အပ်​တယ်)
အမေ​ရိ​ကန် ဗီဇာ မ​ရ​တော့ ကျွန်မ အင်္ဂလန်​သွား​ဖို့ ထပ်​ကြံ​တယ်။
ကျွန်မ အမေ​ရိ​ကား​ကို အတော်​လေး စိတ်နာ​မိ​ခဲ့​သ​လို .. နောက်ထပ် ဗီဇာ Try ဖို့​လည်း မ​ကြိုးစား​ချင်​တော့​ဘူး။ အဲ​ဒီ​အချိန်​မှာ 911 Event ကြီး​က ထ​ဖြစ်​သွား​တော့ US Visa တွေ အကုန်​ပိတ်​ထား​တယ်။ (ကျွန်မ စိတ်​ထဲ​က​နေ အမေ​ရိ​ကား​ဆို​တဲ့ နိုင်ငံ​ကြီး​ကို မောင်း​ထုတ်​လိုက်​တယ်)
ကျွန်မ အတွေး​အာရုံ နေ့​ရက်​တိုင်း​မှာ အင်္ဂလန်​ဆို​တဲ့ နိုင်ငံ​နဲ့ အင်္ဂလန်​မှာ ကျောင်း​သွား​တက်​မယ်။
အလုပ်​လုပ်​မယ်​ဆို​တဲ့ မျှော်လင့်​ချက် ရောင်ခြည်​တွေ​နဲ့ ပြန်လည်​နိုးကြား​တက်​ကြွလာ​ခဲ့​တယ်။
အမေ​ရိ​ကန် Visa Refused လုပ်​ခံ​ခဲ့​ရ​တဲ့ အတွေ့​အကြုံ​က​လည်း ရှိ​နေ​ခဲ့​တော့ သိပ်​တော့ မ​တုန်လှုပ်​တော့​ဘူး .. ပထမ​တစ်​ခါ​လောက်​လည်း ရင်​မ​ခုန်​တော့​ဘူး။ စိတ်​ထဲ​မှာ​လည်း .. ဗီဇာ​ရ​ရင် သွား​မယ်။ မ​ရ​ရင် မ​သွား​ဘူး​ကွာ … ဘာ​လာ​လာ ရင်ဆိုင်​မယ်​ဆို​တဲ့ သံဓိဌာန်​ချထား​ခဲ့​တယ်။
အင်္ဂလန်​ဗီဇာ Form သံ​ရုံး​ကို (Documents, Properties) တွေ​နဲ့ တင်​လိုက်​ပြီး အင်တာဗျူး ဝင်​ဖို့ ရက်​ချိန်း​ကို စောင့်​နေ​ရ​တဲ့​ကာလ​မှာ … ကျောက်​မြောင်း အောင်​မင်္ဂလာ​နဲ့​သီတာ​လမ်း​ထောင့်​က British လူ​မျိုး အစစ် English စာ​သင်​တဲ့ ဆရာ​ကြီး​ရဲ့ Speaking Class ကို သွား​တက်​ခဲ့​တယ်။ Interview မေး​မယ့် Consular က British ဖြစ်​နေ​တော့ (British Assent) ကို ကျွန်မ နား​ရည်​ဝ​ချင်​လို့​ပါ ။။။ သူ​များ​တွေ​ထက် ပို​ထူး​ပြီး ဆ​ရာ့​ကို ကျွန်မ Request လုပ်​တယ်။ ကျွန်မ​ကို Consular က Student Visa Apply လုပ်​မယ့် ကျောင်းသား​တစ်​ယောက်​ကို ဘာ​တွေ​မေး​တတ်​တယ်။ ဘာ​တွေ​ဖြေ​ဖို့ လို​အပ်​တယ်​ဆို​တာ Train လုပ်​ပေး​ဖို့ … Extra Hour ပေး​ဖို့ တောင်း​ဆို​ခဲ့​ပြီး Extra Fee ပေး​ပါ့​မယ်​လို့ ပြော​တာ​ကို ဆရာ​ကြီး​က ဝမ်းသာ​အားရ လက်ခံ​ပြီး သင်ပေး​တယ်။ လေ့ကျင့်​ပေး​တယ်။ အိမ်​မှာ​ပြန်​နားထောင်​ဖို့ သူ့​အသံ​ကို Recorder နဲ့ ဖမ်း​ပြီး ကျွန်မ ထပ်​တ​လဲ​လဲ နားထောင်​ခဲ့​တယ်။ အိမ်​မှာ​နေ​ရင်း​လည်း အင်္ဂလိပ် ဗီ​ဒီ​ယို​တိတ်​ခွေ တစ်​ကား အမြဲ​တမ်း ကြည့်​တယ်။ တစ်​ခါ​ကြည့်​ရင် (၃)ကြိမ်​ပြည့်​အောင် အမြဲ​ကြည့်​တယ်။
– ပထမ​တစ်​ခါ နားလည်​လည် ၊ မ​လည်​လည် ဇာတ်​လမ်း​ကို သိ​အောင်​ကြည့်​တယ်။
– ဒုတိယ​တစ်​ခါ စာတန်းထိုး​တာ လိုက်​ဖတ်​တယ်။ Vocabulary & Idiom တွေ​ကို နားလည်​အောင် လေ့​လာ​တယ်။
– တတိယ​တစ်​ခါ သရုပ်ဆောင်​တွေ​ရဲ့ Action & Dialogue တွေ​ကို အတုခိုး​တယ်။
( သူ​တို့ ရွဲ့​ပြီး ပြော​တဲ့​စကား ၊ ရန်​ဖြစ်​တဲ့​အချိန် ပြော​တဲ့​စကား ၊ ကြည်နူး​တဲ့​အချိန် ပြော​တဲ့​စကား)
ဒါ​တင်​အား​မ​ရ​ဘူး ။။။ အိမ်​တိုင်​ရာ​ရောက် အင်္ဂလိပ်​စကားပြော လိုက်​သင်ပေး​တဲ့ သု​ဝဏ္ဏ​မှာ​နေ​တဲ့ “ဆရာ​ချစ်” လို့ ကျွန်မ​ချစ်​စ​နိုးခေါ်​တဲ့ ဆရာ​ကို​လည်း တစ်​ပတ်(၅)ရက် တစ်​နေ့ (၂)နာရီ အိမ်​မှာခေါ်​သင်​တယ်။ ဆရာ​ချစ်​ဟာ .. ကျွန်မ​ကို နေ့စဉ် ခေါင်းစဉ် (၂)ခု ပေး​ပြီး အပြန်​အလှန် လေ့ကျင့်​ပေး​တယ်။ ဥပမာ ( Immigration ဝင်​ရင် ဘာ​တွေ​ပြော​ရ​မယ်။ ဘာ​တွေ သိ​ထား​ရ​မယ်။ ဟင်း​ချက်​စရာ​သွား​ဝယ်​ရင် ဘယ်​နေရာ​တွေ သိ​ထား​ရ​မယ်။ အခေါ်​အဝေါ် အသုံး​အနှုန်း​တွေ။ စာတိုက်​မှာ ပါ​ဆယ်​သွား​ပို့​မယ်​ဆို ဘယ်​လို​ပြော​ရ​မယ် .. ဘယ်​လို​မေး​ရ​မယ်) အစ​ရှိ​တဲ့ နေ့စဉ်​သုံး​ရ​မယ့် အင်္ဂလိပ်​စာ အခေါ်​အဝေါ်​တွေ​နဲ့ အသုံး​အနှုန်း Usage တွေ​ကို ဆရာ​တပည့်​ထက် သားအဖ​လို စေတနာ​ထား​ပြီး သင်ပေး​ခဲ့​တယ်။
အင်္ဂလန် သံ​ရုံး​ကို ဗီဇာ​ဝင်​ဖို့ ရက်​ချိန်း​ရ​ပြီ ~~~
ကိုယ့်ကို​ကိုယ် အားပေး​လိုက်​တယ် ..
ရွှေ​သက်​ရေ … Be Ready for your 2nd Chance !!!
Next post ကျွန်​မမျော်​လင့်​ခဲ့​သော​နိုင်ငံ​ခြား​အပိုင်း(၁)
Previous post အလည်အပတ် ခရီးသွားရန် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ